Ahoana ny fiforonan'ny taolan'ny soavaly | Soavaly Noti
Vokatry ny fivoarana miandalana ny rafitry ny soavaly Nisy fiovana vitsivitsy. Ireo fiovana ireo dia hita indrindra amin'ny faran'ny vatan'izy ireo, ka mahatonga ny rantsan-tànana hahena ho iray monja voahodidin'ny fitaovana manaitaitra fantatra amin'ny hoe satroka na vera.
Eo amin'ny tendrony aloha, ny ulna sy ny radius dia nanatevin-daharana ka niteraka taolana iray, dia toy izany koa ny tibia sy ny fibula, nanakana ny tanana sy ny tongotra tsy hihodina aoriana.
Ny taolan'i lava kokoa ny lohan'ny soavaly ary manana tarehy izay avo roa heny amin'ny karandohany izy ireo. Ny valanorano koa dia efa nahitatra, misy velarana malalaka sy fisaka amin'ny faritra ambany amin'ny faritra aoriana.
Ny soavaly dia manana nify 36 farafahakeliny ka ny 12 dia incisor ary 24 ny malar. Ny hazondamosin'ny hazondamosinao dia vita amin'ny vertebra 51.
Ny taolan'ilay soavaly dia taolana 210, Ity taolana ity dia manatanteraka ny fiasa ho fanohanana ny hozatra, miaro ireo taova anatiny ary mamela ny fivezivezena hahafahany mifehy ny hafainganana hafainganam-pandeha.
1 Fivoaran'ny taolana soavaly
2 Soavaly soavaly
3 Ny lohan'ny soavaly
4 Ny vozon'ny soavaly
5 Ny vatan'ny fitoviana
Fivoaran'ny taolana soavaly
Ny taolana dia namboarina mba hanomezana fahafaham-po ireo fiasa samihafa.
Soavaly, toy ny biby hafa, nivoatra izy ireo nandritra ny tantarany, izy midika izany fa niova ny taolanao taolana. Ireo fiovana ireo dia azo jerena indrindra amin'ny faran'ny Equines, na dia hita any amin'ny faritra hafa amin'ny taolany aza izy ireo.
Noho ny fiompiana an-trano sy ny asa nomen'ny olombelona azy, ny soavaly dia mety hijaly noho ny hozatra na ny taolana, noho izany zava-dehibe ny fahalalana hoe inona ny vatanao ary ny faritra iza no mora tohina, mba hahafahanao misoroka izany Amin'ny fomba tsotra.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fivoaran'ny taolana ny equines ianao dia tohizo ny famakiana fa holazainay aminao eto ambany izany.
Ny vatan'ny equines dia mizara ho: loha, tendany, vatan-kazo sy tendrony.
sokajy taolana 210 ny taolana soavaly ary ny hazondamosina dia misy Vertebra 51. Ao amin'ny hazondamosina, 7 ny vozon-tranonjaza, 18 tselatra, 6 lumbar ary 15 caudal. Ny taolana dia manana ny anjara toeran'ny fanohanana ny hozatra, ary koa ny fiarovana ny taova anatiny ary mamela ny fivezivezena hahafahan'izy ireo mifehy ny hafainganana hafainganam-pandeha.
Ny zava-misy mahaliana dia ny taolana soavaly tsy manana clavicle. Fa kosa, ny faritry ny tongolo mialoha dia mifamatotra amin'ny hazondamosina amin'ny hozatra, tendon ary ligamenta.
Naneho hevitra izahay fa ny farany dia niatrika fiovana lehibe indrindra, izany dia miharihary amin'ny tongony eo aloha izay misy ny ny ulna sy ny radius dia nitambatra tamin'ny taolana iray. Toy izany koa ny tibia sy ny fibula. Amin'ny tranga farany, ny fampiraisana ireo taolana ireo dia manakana ireo mpitaingin-tsoavaly tsy hihodina ny tanany sy ny tongony aorin'izany. Miresaka tanana sy tongotra ny rantsan-tànana dia nahena ho iray voahodidina fitaovana manaitra antsoina hoe fiarovan-doha na vera.
Ny tendrony aloha dia ireo izay mavesatra ny lanjan'ny soavaly.
Ny lohan'ny soavaly
Ny loha dia iray amin'ireo faritra maneho soavaly indrindra ary izy io koa dia iray amin'ireo faritra taolana izay niova. Amin'izao fotoana izao ny taolana mandrafitra ny lohan'ny soavaly dia lava kokoa ary izy ireo dia manana tarehy izay ny halavany dia in-droa ny halavan'ny taolana amin'ny karandohany. Nihalava koa ny valanoranony, manana velarana malalaka sy fisaka amin'ny faritra ambany amin'ny faritra aoriana.
Ny loha dia misy:
Ternily, izay ilay faritra lava sy henjana eo anelanelan'ny maso.
Chamfer, ny tapany lava amin'ny zanak'omby izay mametra ny maso sy ny vavorona.
lovia famafazana na fossa temporal, dia ireo déprésix roa izay eo amin'ny lafiny roa amin'ny volomaso.
barba, ampahan'ny zoron'ny molotra.
Belfos, molotra ambany. Tena faritra saro-pady izy io.
valanorano, Faritra aorian'ny sisin'ny valanoran'ny eine.
Ao am-bava, ny soavaly dia manana nify 36 farafahakeliny ka ny 12 dia kofehy ary ny 24 dia molera.
Ny vozon'ny soavaly
Ny vozon'ny Equine dia manana endrika trapezoidal, miaraka amina fotony manify eo amin'ny fihaonan-doha miaraka amin'ny loha ary midadasika kokoa amin'ny vatan-kazo.
Ny hatoka dia manana asa tena lehibe hatrizay miditra an-tsehatra amin'ny fifandanjana mitovy.
Ny ampahany hihaonan'ny mane dia mety mahitsy, lava na mivolombola miankina amin'ny karazana Equine. Ny zava-misy mahaliana momba ny mana dia ny ankamaroan'ny lehilahy dia be mponina noho ny an'ny vavy.
Ny vatan'ny fitoviana
Tsy ny faritra lehibe indrindra amin'ny anatomia Equine ihany, fa koa manome ny toetra sasany na ny hafa ho an'ny soavaly arakaraka ny bikany sy kibo.
Ny faritry ny hazondamosin'ny tratra izay mifanandrify amin'ny faritry ny malazo sy ny lamosina, ary koa ny faritra misy ny lavaka izay mifanandrify amin'ny faran'ny lamosina sy ny rump, Mety hiharan'ny fahasimbana izy ireo satria io no toerana hametrahana ilay lasely.
Ny faritra misy ny soroka dia mety maratra matetika ihany koa amin'ny jacks mitsambikina.
Es zava-dehibe ny fikasihan'ilay mpitaingina ny faritra hazondamosina matetika mba hanombanana ny tsy fahazoana aina mety hitranga amin'ny biby ary azo tsaboina ara-potoana izy ireo.
Mba hisorohana ny ratra dia tokony hisoroka ny mitaingina soavaly mivantana ny mpitaingina raha vantany vao mivoaka ny tranon'omby izy ireo, satria lanja lehibe tokoa no apetraka aminy.
Mizara roa ny vatan-kazo:
Cruz, faritra avo sy hozatra amin'ny faran'ny vozona. Io faritra io no mandrefy ny haavon'ny soavaly.
indray, mifanitsy amin'ny hazo fijaliana eo aloha izy, miaraka amin'ny sisiny sy amin'ny hazondamosiko ao aoriana.
Loin, faritra voa.
vondrona, faritra farany amin'ny lamosina izay mametra ny rambony.
Zara, sisin'ny croup.
GirthMiorina eo anoloana izy miaraka amin'ny armpits ary ao aoriany miaraka amin'ny kibo.
takibany na ny sisiny, eo amin'ny kibony, alohan'ny haunches.
Araka ny hitantsika dia niova ny taolana, fa maninona no misy ireo fiovana ireo? ny soavaly dia efa niasa mba hanomezana fahafaham-po ireo fiasa samihafa.
Tsy maintsy raisina fa miankina amin'ny hazakazaka dia mety misy fiovana sasany amin'ny faritra sasany amin'ny anatomia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Rafitra taolana soavaly